Drip: Chii chinonzi Ecommerce Kasitoma Ukama hwehukama maneja (ECRM)?
Muvhuro, Mbudzi 30, 2020 Chipiri, Zvita 1, 2020 Douglas Karr
Ecommerce Mutengi Ukama Hukama Management manejimendi inogadzira hukama huri pakati pezvitoro zveecommerce nevatengi vavo zviitiko zvisingakanganwike zvinotyaira kuvimbika nemari. ECRM inorongedza simba rakawanda kupfuura iyo Email Service Provider (ESP) uye yakanyanya-kutarisa kune vatengi kupfuura yeCustomer Relationship Management (CRM) chikuva. Chii chinonzi ECRM? ECRM dzinopa simba varidzi vezvitoro zvepamhepo kuti vanzwisise mutengi wese akasarudzika - zvavanofarira, zvavanotenga, uye maitiro - uye vanounza zvine hunyanzvi, zvakasarudzika zviitiko zvevatengi pachiyero nekushandisa yakaunganidzwa data revatengi pane chero yakasanganiswa yekushambadzira chiteshi.
Shandisa $ 299 uye Tumira Saiti Yako kuYahoo?
Chitatu, June 10, 2009 Chitatu, June 10, 2009 Douglas Karr
Ungangoda kuenderera nekuchenjerera kana uchishandisa mamwe akajairwa online SEO maturusi uye kuverenga mamwe maforamu ekuti ungakwidziridze saiti yako saiti, chiremera uye backlinks ... mamwe eaya ruzivo akapfuura echinyakare. Nyaya iripo, ndakaverenga pane mashoma masosi anotumira saiti yako kuYahoo dhairekitori yaive zano rakanaka. Kwe $ 299, yako saiti yaizonyorerwa mukati meYahoo! madhairekitori emabhizinesi, anokwidziridzwa paYahoo's